Agromart | Agricultural Marketplace Nepal कागती खेती गर्ने सजिलो तरीका – Agromart
कागती खेती गर्ने सजिलो तरीका
कागती सदावहार अमिलो प्रजातिको वनस्पति हो। यसको प्रयोग भान्सादेखि अन्य सरसफाइ जस्ता कार्यमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यसको उत्पत्ति ठयाक्कै थाह नभए पनि उत्तरी भारतको आसाम, उत्तरी वर्मा र चीनमा पहिलो शताब्दीतिर यो देखिएको अनुमान गरिएको छ। पछि दक्षिणी इटाली हुँदै युरोप, अफिकातिर यसको विस्तार भएको मानिएको छ। तर हालका दिनमा विश्वका सम्पूर्ण देशमा कागती पाइन्छ। संस्कृत भाषामा निम्बु भनेर चिनिने कागतीको वैज्ञानिक नाम भने साइट्रस लिमोसा हो। विश्वमा धेरै मात्रामा कागती उत्पादन गर्ने मुलुकमा भारत, चीन, मेक्सिको, ब्राजिल र अर्जेन्टिना छन्। विभिन्न कागतीका प्रजाति उष्ण प्रदेशदेखि शीताधिक क्षेत्रसम्म पाइन्छन्। कागतीको रसमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले स्वास्थ्यको लागी अत्यन्तै महत्वपूर्ण फल हो। अपच एवं पेटको सबै जसो विकारहरु निष्काशन गर्न यो फल निकै उपयोगी हुन्छ ।
कागती खेतीको लागी कस्तो हावापानी चाहिन्छ ?
कागतीलाई सिचाई :
कागती खेतीको लागी कस्तो माटोको आवश्यक पर्दछ ?
जमिनको सतह देखि २ मीटर गहिरो सम्म चट्टान नभएको, पानी नजम्ने प्रशस्त प्राङ्गगारिक पदार्थ भएको, माटोको पि.एच. ५.५–६.५ सम्म भएको दोमट माटो सवै भन्दा उपयुक्त हुन्छ।
कागतीको वोट रोपने दुरी कति राख्नु पर्दछ ?
कागतीको विरुवा रोप्न के कस्तो तैयारी गर्नु पर्छ :
खाडल कहिले खन्ने :
खाडल कहिले भर्ने :
विरुवा कहिले रोप्ने :
कागतीको विरुवा एक पटक रोपेपछि कति बर्षसम्म फल दिई रहन्छ ?
कागती बगैंचामा सिंचाईको आवश्यकता कहिले पर्छ ?
सिंचाईको लागी श्रोतमा पानी कम छ भने कसरी व्यवस्था मिलाउने :
वोट हुर्कि सकेपछि मलखाद कतिको हाल्नु पर्छ ?
मलखाद दिने तरिका :
कागती विरुवालाई काँटछाँट गर्ने विधि :
कागतीको फल टिप्न उपयुक्त समय के हो ?
कागतीमा लाग्ने मुख्य मुख्य किराहरु कुन कुन हुन ?
कागतीमा लाग्ने किरा ठुलो पुतली र पातको झिंगालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
कागतीको कतले किरा कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
कागतीको लाही र सिट्रस सिल्ला किरा कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
कागतीको मिलिबग किरा कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
कागतीमा लाग्ने रोगहरु :
कागतीमा लाग्ने रोगहरु नियन्त्रणका उपाय के हो ?
स्वास्थ्यमा प्रभाव :
कागती केही गरम, हल्का, अमिलो र सुगन्धित प्रकृतिको हुन्छ। राम्रो नपाकेको काँचो कागती पित्त र वातवर्द्धक हुन्छ। पित्त, कफ र शूलमा पनि यो लाभादायक छ। एक अनुसन्धान अनुसार प्रतिएक सय ग्राम कागतीमा २९ किलो क्यालोरी शक्ति पाइन्छ। यसमा पाइने फ्याभोन्वाइड ग्लाइकोसाइले मुटु र रक्त धमनीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। कागतीमा थायमिन, राइबोफ्लाबिन, प्यान्टोथेनिन एसिड, आइरन, म्याग्नेसियम पाइन्छ। अझ यो फाइबर भिटामिन बी ६, क्याल्सियम, पोटासियम, फोलेट, पोटासियमको राम्रो स्रोत हो। साइट्रिक एसिडले पाचन प्रकियालाई दरिलो बनाउँछ साथै मृगौलामा हुने पत्थरलाई पगाल्न मद्दत गर्दछ। यसमा यस्ता एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ जुन बिटा क्यारोटिन, बिटा क्रिप्टोज्यान्थिन, जीयाज्यान्थिन, ल्युटिन र भिटामिन ए ले म्युकस झिल्ली, छाला र दृष्टिलाई राम्रो गर्दछ।